‘नेकपा पार्टी भ्रष्ट्रचारी र गुण्डाहरुको भर्ति केन्द्र जस्तै भयो’ : बालकृष्ण ढुङ्गेल – ताजा समाचार
‘नेकपा पार्टी भ्रष्ट्रचारी र गुण्डाहरुको भर्ति केन्द्र जस्तै भयो’ : बालकृष्ण ढुङ्गेल
काठमाडौ । ओखलढुङ्गाका पूर्व सांसद तथा पूर्व माओवादी नेता हाल नेकपाका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेल कुनै समय चर्चाको शिखरमा थिए। अहिले पनि उनको चर्चा र परिचर्चा उस्तै नै छ। दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार बनेको छ। एक समय जनताले भन्ने गरेका थिए कि देशमा विकास चाहने पार्टी नेकपा नै हो। तर पछिल्लो समय सरकारले गरेको कामप्रती जनता देखी आम नेता कार्यकर्ताहरु समेत सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
के साच्चै नकपाको सरकार नेकपा पार्टी कमजोर भएकै हो ? सरकारले राम्रो सँग काम गर्न नसकेकै हो त? यो प्रश्न फरक प्रतीपक्ष राजनीति दल ले मात्र होईन नेकपाकै शिर्ष नेताहरुले पनि उठाँउदै आएका छन्। सशस्त्र यु*द्धकालमा स्थानिय भूवन भनिने उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा उनलाई सर्वोच्च अदालतले जेल हालेको थियो। उनि २०७५ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसकै दिन राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिएपछि उनी जेल मुक्त भएका थिए।
जेलबाट रिहा भएपछि उनको पक्ष र विपक्षमा मत बाँझीएको थियो। धेरै लामो समय पछि नेपालमा ठुलो राजनीति परीवर्तन भयो। पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले पार्टी एकता भएको पनि १४ महिना बिति सकेको छ। सबै जिल्ला तह सम्मको एकता सम्पन्न भएको छ।सबै जिल्लाहरुको अध्यक्ष र सचिव देखि इन्चार्ज सहइन्चार्जको जिम्मेवारी टुङ्गाएको छ।
आर्दशका नेताका रुपमा चिरपरिचित नेता हुन् बालकृष्ण ढुङ्गेल तर उनलाई पार्टीले कुनै पनि जिम्मे वारी दिएको छैन अहिले उनी जिम्मे वारी विहिन भएका छन्। उनै ढुङ्गेल यति बेला के गरि रहेका होलान् ? वर्तमान राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला ? यसै विषयवस्तुलाई केन्द्रीत गरेर पत्रकार भुमिराज अधिकारीले नेकपाका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलसँग कुराकानी गरेका छन् ।
स्रोत : बालकृष्ण ढुङ्गेलले नेपालटकसँग दिएको अन्तर्वार्तामा आधारित